तपाईँ पाठ मात्र एनिमेसन गर्न सक्नुहुन्छ जुन चित्राङ्कन वस्तुमा समावेश भएको थियो, जस्तै आयातहरू, पङ्क्तिहरू, वा पाठ वस्तुहरू. उदाहरणका लागि, आयात कोर्नुहोस्, र आयातमा डबल-क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँको पाठ प्रविष्ट गर्नुहोस्.
तपाईँले एनिमेसन गर्न चाहनु भएको पाठको चित्राङ्कन वस्तु चयन गर्नुहोस्.
ढाँचा - शैलीहरू र ढाँचारोज्नुहोस् , र पृष्ठ शैली प्रतिमा क्लिक गर्नुहोस्।
प्रभावबाकसमा, तपाईँले चाहनु भएको एनिमेसन चयन गर्नुहोस्।
प्रभावको गुणहरू सेट गर्नुहोस्, र ठीक छक्लिक गर्नुहोस्.
Title is: पाठ एनिमेसन